Best ALLOY PRODUCTS Mugadziri uye Fekitori | Jinggong
Kunze kwezvakajairwa zvigadzirwa, fekitori zvakare inogadzira akawanda alloy zvigadzirwa. Iyo fekitori ine CNC lathes, yekugaya michina, mapuraneti, ekuchina michina, yekuchina michina, waya-yekucheka michina, laser yekuveza michina etc.Zvese zvinopfuura zana seti, izvo zvinotigonesa kuburitsa akawanda akakosha chiwanikwa zvigadzirwa, senge yakanyanya kunyatso kuita isina chemakemikari anchor stud, Stainless novel yemakemikari anchor (tambo mukati), isina waya hit anchor, isina kudonhedza mune anchor, isina chinhu photovoltaic zvishongedzo, mhangura alloy zvikamu (chaiyo zvigadzirwa), titanium chiwanikwa zvikamu zinc chiwanikwa zvigadzirwa nezvimwe zvakadaro.
Chaicho michina uye yemhando yepamusoro mbishi zvinhu zvinoita kuti hukuru hwezvigadzirwa zvedu mukushanda uye pakuonekwa.
Chikwata chakakura chekambani, pfungwa yekutendeseka, yakasimba yemhando manejimendi manejimendi, kurapwa kune vashandi uye panguva yakakodzera mushure-yekutengesa sevhisi iri kutitungamira kuti tiwane kuvimba kwevanowedzera vatengi.
-High-mhando mbishi zvigadzirwa
-Kwete MOQ chinodiwa
Inogadziriswazve diki bepa bhokisi kurongedza; Mapepa epurasitiki anodzikira
Kurongedza huwandu: kubva pa1 pcs asi isingasviki 10kgs pasuru yega yega
A: Isu tiri fekitori uye tine ruzivo rwekunze kunze kweanopfuura makore gumi.
Q2: Ndezvipi zvinhu zvako zvikuru zvigadzirwa?
A: Anchors, bhaudhi & nati asi isu tiri kugara tichitsvaga zvigadzirwa zvitsva
Q3: Unopa sampuli here? Iko kusununguka kana kuwedzerwa?
A: Ehe, isu tinopa yemahara sampuro, asi mutengi anofanira kubhadhara mari yekutaura.
Q3: Ndechipi chirevo chaunopa iwe?
A: FOB, CIF, uye dzimwe nzira zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Q4: Ndeipi yako nguva yekuendesa?
Zvinoenderana neodha yakawanda, uye izvo zvigadzirwa zvinodiwa.
Q5: Ndeipi yako yekubhadhara nguva?
NaT / T, 30% yakabhadharwa nguva isati yasvika sedhipoziti, 70% mwero kurwisa B / L kopi.
Q6: Une mushure-kutengesa sevhisi?
A: Ehe, isu tine yekutanga-kirasi mushure-yekutengesa sevhisi. Iwe unogona kutibata nesu chero nguva kana iwe uine chero mubvunzo.